असम्भवलाई सम्भव बनाउँदैं चीन ! हावा र पानीमा चल्ने विश्वकैं ठुलो जहाज (तस्विरहरु हेर्नुहोस) – www.agnijwala.com
असम्भवलाई सम्भव बनाउँदैं चीन ! हावा र पानीमा चल्ने विश्वकैं ठुलो जहाज (तस्विरहरु हेर्नुहोस)
बेइजिङ । हर असम्भवलाई सम्भव बनाउँन अहिले चीन लागि परेको छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो विमान एजी ६०० को झांगेन जलाशयमा सफलतापूर्वक परीक्षण सम्पन्न भएको छ । चीनमा पानी र आकाशमा उड्ने क्षमता भएको यो समुद्री विमान मात्र चीनमा विकसित गरिएको छ। चीन एविएशन इंडस्ट्री जनरल एयरक्राफ्ट कंपनी लिमिटेड (सीएआईजीए) का अनुसार, सोमवार एजी ६०० सि विमान प्रतिघन्टन १४५ किलोमिटरको गतिमा हुबेई प्रांतको जिंगमेनमा परीक्षण गरिएको थियो।
सीएआईजीए मंगलबार बताएको छ कि एजी ६०० नाम कुनलोंग राखिएको छ जुन चीनमा विकसित भएको हो । यो परीक्षणको समयमा स्थिर स्थितिमा थियो। यो सामान्य काम गर्दछ। एजी ६००, संसारमा सबैभन्दा ठूलो विमान हो जसलाई पानी र हावा संग उडान गर्न सकिन्छ । चार तर्फबाट चार टर्ब्रोप्रोप इन्जिन रहेको छ। यो मुख्य समुद्री सीमा हेरचाहा, अग्नि नियन्त्रण र समुद्री निगरानी मा प्रयोग गरिनेछ। चीनको औपचारिक समाचार एजेन्सी सिन्हवाले गत वर्ष डिसेम्बरमा भएको पहिलो उडानबाट यस प्रकारका विमानको धेरै सफल परीक्षणहरू गरिएको छ। एजेन्सी